Lalàna maneritery: lalàna vaovao ho an’ny heloka an-tserasera ao Libia · Global Voices teny Malagasy
Libiàna marobe mihevitra fa manitsakitsaka ny zony ireo lalàna vaovao
Voadika ny 21 Novambra 2021 15:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, English, English
Faneriterena ny zo nomerika no fahitàna ireo lalàna vao avy nolanian'ireo mpanao lalàna tamin'ny 26 Oktôbra. Loharano: SMEX.
Ny 12 Novambra ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany tao amin'ny SMEX. Ity dika nokiraina eto ity dia naverina navoaka ho ampahany amin'ny fifanaraham-piarahamiasa amin'ny Global Voices.
Ny 16 Oktôbra 2021, nolanian'ny antenimiera mpanao lalàna libiàna ny “Lalàna iray mifehy ny heloka an-tambajotra”, andro iray taorian'ny nankatoavana ny “E-Transactions Law” (lalàna mifehy ny fandraharahana elektrônika)
Eny anaty fampiharana, natao fotsiny hiarovana ireo mpitondra fanjakàna ireo lalàna mifehy ny heloka an-tambajotra. Matetika ireny lalàna ireny no mamoritra sy mametraka faneriterena marobe amin'ny fahalalahana maneho hevitra no sady mametraka ho ara-drariny ny sivana sy fanarahamaso ataon'ny fanjakàna.
Tsy manavaka na iza na iza io lalàna libiàna vaovao mifehy ny heloka an-tambajotra io. Mivandravandra be ny famelezany ny fahalalahana maneho hevitra eny anaty habaka, amin'ny fametrahana fepetra manjavozavo ahafahana manana fifehezana feno amin'ny vahoaka sy ny fanaovana gazety, tsy ilàna fanomezandàlana avy amin'ny fitsaràna. Mamoritra no fahitàn'ireo Libiàna sasany an'io lalàna io, indrindra fa noho izy io manasazy ireo izay mamoaka votoaty ety anaty tambajotra.
Araka ilay lalàna, manana fahefana ny Sampandraharaham-Panjakana misahana ny Fitoniana sy ny Fiarovana ny Fampahalalambaovao mba hibahana ireo tranonkala sy votoaty “tsy iriana”, rehefa tsy misy ny fanomezandalàna araka ny lalàna.
Anatin'ny maro amin'ireo andininy, ny fiteny amin'ny ankapobeny no ampiasain'ilay lalàna mifehy ny heloka an-tambajotra, izay manome fahafahana midadasika ho an'ireo mpitsara amin'ny famakiana azy, ary fahefana midadasika tsy refesi-mandidy amin'ny resaka porofo sy fanamelohana.
Nitarin'ireo Libiàna mpanao lalàna ihany koa ny sehatra ampihàrana ilay lalàna mba ho tafiditra ao ireo heloka bevava natao tany ivelan'ny firenena “raha toa ka mitatra hatrany Libia ny fiantraikany sy ny vokany”. Manery ny olona hanivana ny tenany io ho an'ireo olompirenena miaina any ivelan'i Libia, indrindra fa raha toa ry zareo mihevitra ny mbola hiverina an-tanindrazany.
Ny fotoana nanambaràna ilay lalàna, niaraka amin'ny hoe tsy ho ela intsony ny fifidianana izay ho filoham-pirenena, dia nahatonga ny maro hanontany tena momba ny tanjon'ny fanapahankevitra tahaka iray tahaka izao. Taorian'ny nankatoavana ilay lalàna, nambaran'ny mpanolotsaina momba ny media miasa ho an'ny antenimiera fa “ireo heloka bevava manohintohina ny fanjakana no sahanin'ilay lalàna mifehy ny heloka an-tambajotra, ankoatra ireo endrika hafa, fa tsy manohitra ny fahalalahana maneho hevitra izy io. Ny heloka bevava sy ny fampiasàna amin'ny tsy tokony ho izy ny teknôlôjia elektrônika misy ifandraisany amin'ny fanjakàna, ny olona na andrimpanjakana hafa, isan'ireny ny fanaovana hosoka sy ny fanelezana tsaho.”
Atahoran-dry zareo Libiàna ny hoe miaraka amin'ny fanatonan'ny fifidianana, ho ampiasaina haneriterena ny fahalalahana maneho hevitra ilay lalàna mifehy ny heloka an-tambajotra ary hanemporana ireo feo pôlitika vaovao, indrindra fa anatin'ireo fisalasalàna marobe manodidina ny nandaniana sy ny nanambaràna azy.
Zavadehibe ny anamarihana fa tao anatin'ny taona roa farany, izay noheverin'ny Entenimieran'ny Solombavambahoaka Libiàna ho lalàna tena ilana ihany no nolaniany, ka mahatonga ny ezaka rehetra ataon-dry zareo amin'izao fotoana izao mba hametrahana io lalàna io ho vao mainka mampiahiahy bebe kokoa.
Anaty lahatsoratra am-bilaogy iray, ilay Libiàna mpikatroka ho an'ny zo nomerika, Amjad Badr, dia nizara ny tebitebin'ireo Libiàna momba io lalàna io sy ny ahiahin-dry zareo momba ny tetiandro mahakasika azy, indrindra fa ny tahotra hoe ho atao fitaovana ilay lalàna mba hanamelohana ireo zo, toy ny fanafenana ny fifampiresahana (encryption), ary hamoretana ny fahalalahan'ny fanehoana hevitra amin'ny filazàna azy ho fiarovana ny fizakamànana ara-tsaina sy ny ady amin'ny fampihorohoroana.